कोरोना महामारी : कसरी काम गर्दैछन् प्रदेशका तीन ठूला नगर ?
विराटनगर, १९ भदौ । प्रदेश १ मा जनघनत्वको आधारमा विराटनगर, इटहरी र धरान ठूला सहर हुन । पछिल्लो समय तीन ठूला सहर कोरोना महामारीका कारण बढी प्रभावित छन् ।
समुदायस्तरमा संक्रमण देखिएको विराटनगर महानगरपालिकामा ११ सय १० जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । धरानमा २०० र इटहरीमा २२३ कोरोना संक्रमित छन् ।
संक्रमितमध्ये विराटनगरमा ११ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । धरानमा एकै परिवारका दुईसहित ६ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । धरानमा मृत्यु भएका ६ जना ६० वर्ष माथिका छन् । अधिकांश दीर्घरोगी हुन् ।
प्रदेश १ सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार बुधबारसम्म मोरङमा १ हजार ७४६ जना कोरोना संक्रमित छन् । सुनसरीमा ८६७ संक्रमित छन् । संक्रमितमध्ये मोरङमा ७१८ र सुनसरीमा २८१ जना संक्रमणमुक्त भएका छन् ।
कसरी काम गर्दैछन् ठूला स्थानीय सरकार ?
धरान, इटहरी उपमहानगर र विराटनगर महानगरपालिकाले पीसीआर जाँचलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । तर विराटनगरमा भने पीसीआर जाँच गर्नेकास संख्या घट्दै गएको छ ।
मेयर भीम पराजुलीका अनुसार लक्षण नदेखिएको बताउँदै संक्रमितको कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङमा परेकाहरू पीसीआर जाँच गर्न मान्दैनन् । विराटनगरका संक्रमितमध्ये ५९६ घरमै बस्न बाध्य छन् ।
संक्रमण पुष्टि भए घरमै बस्नुपर्ने र समाजबाट तिरस्कृत हुने डरले पीसीआर जाँच गर्न चासो नदिएका हुन् । महानगरले बैजनाथपुर स्वास्थ्य चौकी, काली सेवा सदन, मारवाडी सेवा सदनमा होल्डिङ आइसोलेशन सञ्चालन गरिरहेको छ ।
होटल एसियाटिकमा पनि आइसोलेशन सेञ्टर सञ्चालनका लागि समन्वय गरेको थियो । संक्रमण नियन्त्रणका लागि समुदायस्तरमा परीक्षण केन्द्रीय गरिएको मेयर पराजुलीले बताए ।
इटहरी उपमहानगरपालिकाका मेयर द्वारिकलाल चौधरी संक्रमितलाई राख्नका लागि एक सय बेडको आइसोलेशन निर्माण गरिरहेको बताउँछन् । कोरोना नियन्त्रणका लागि पीसीआर जाँचको दायरा फराकिलो बनाइएको उनले बताए । ‘एक सय बेडको आइसोलेशन एक साताभित्र तयार हुन्छ,’ उनले भने, ‘पीसीआर जाँच पनि बढाइएको छ ।’
इटहरीमा संक्रमितमध्ये ६१ जना संक्रमणमुक्त भएका छन् । तर होम आइसोलेशनमा बसेकाहरूको तथ्यांक उपमहानगरपालिकासँग छैन । आइसोलेशनमा बसेकाहरूको तथ्यांक नहुँदा संक्रमण फैलने जोखिम उच्च छ ।
धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर तिलक राई पीसीआर जाँच बढाइएको बताउँछन् । धरान प्रवेश बिन्दुमा कडाइ गरेर परीक्षणलाई तीब्र बनाएको उनले बताए ।
उनका अनुसार संक्रमितलाई राख्नका लागि उपमहानगरपालिकाले छुट्टै आइसोलेशन सेन्टर पनि सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
३५ जना संक्रमित होम आइसोलेशनमा बसेका छन् । होम आइसोलेशनमा संक्रमितको निगरानीका लागि बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका विद्यार्थीलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । दैनिक फोन गरेर अवस्था बुझ्ने उनले बताए ।
संक्रमण नियन्त्रणका लागि धरानले नाका प्रवेशमा कडाइ गरेको मेयर राईले बताए । उनका अनुसार प्रवेशद्वारमा गर्नेको विवरण टिप्ने गरिन्छ ।
दीर्घरोगीलाई कोरोनाले बढी असर गर्ने भएकाले नगरपालिकाले घरबाट ननिस्कन र सावधानी अपनाउन आग्रह गरिरहेको उनले बताए ।
संक्रमण बढेपछि तीन वटै सहरमा निषेधाज्ञा लागू भएको थियो । पछिल्लो समय निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउँदै बजार खुला गर्न थालिएको छ ।